Eng. Cabdi Jiinow Calasow Guddoomiyaha Gobolka Sh/dhexe oo ku sugan magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay xaaladda magaaladaasi
Eng. Cabdi Jiinow Calasow Guddoomiyaha Gobolka Sh/dhexe oo ku sugan magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay xaaladda magaaladaasi iyo degmooyin kale oo ciidamada iyo kuwa AMISOM maanta ay la wareegeen.
Waxa uu sheegay Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe in ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay maanta u suuragashay inay ka xoreeyaan magaalada Jowhar kooxaha khawaarijta Shabaab waa sida uu hadalka u dhigaye, isagoona caddeeyay in dagaallo fool ka fool ah oo maalmihii la soo dhaafay ay la galeen Shabaab aanu ahayn sida ay Warbaahinta ku sheegeyso.
"Dagaalka kooxaha khawaarijta ah la galeen maalmihii la soo dhaafay ciidamada Dowladda ma ahayn dagaal qorsheysan ee wuxuu ahaa dagaal ay ku muujinayeen inay weli joogaan" ayuu yiri Eng. Cabdi Jiinow Calasow.
Waxa uu sheegay Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe in ciidamada Dowladda ay si rasmi ah gacanta ugu dhigeen magaalada Jowhar, Degmada Mahadaay iyo tuulooyinka ku dhow dhow, wuxuuna ka codsaday shacabka ku dhaqan gobolka inay garab istaagaan ciidamada Dowladda si buu yiri aanu dhexdooda u soo gelin kooxaha cadowga ah.
"Kooxaha khawaarijta Shabaab sidaan loogama harayo, waana la daba soconayaa ilaa iyo inta ay taako ka mid ah xuduudaha Soomaaliya ku sugan yihiin" ayuu yiri Eng. Cabdi Jiinow Calasow oo sheegay in tallaabada ugu horeysa ee uu maamulkiisu ku dhaqaaqayo ay tahay soo celinta amniga iyo kala dambeynta.